Maalin: Janaayo 28, 2020
Wadayaasha Basaska Gaarka ah ee Dadweynaha ee ka hawlgala Istanbul ayaa go'aansaday inay qayb ka mid ah dakhligooda u diraan Xafiiska Guddoomiyaha Gobolka Elazig Arbacada, iyaga oo qaadanaya go'aan wadajir ah. Agaasinka taraafikada ee Dowlada Hoose Magaalada Istanbul (IMM) [More ...]
Qatar waxay go’aansatay inay dib u bilowdo mashruuca Sharq Isgoysyada Sharq, kaas oo ku xiri doona Ras Abu Aboud gobolka Galbeedka Baay, oo ka mid ah mashaariicda mudnaanta leh. Waraaqaha ujeedka loogu talagalay mashruuca $ 8 bilyan oo Sharg Crossing ee Qadar [More ...]
Gawaarida dadweynaha ee magaalada Denizli ee Caasimadaha Magaalada waa la nadiifiyaa maalin walbana waa la nadiifiyaa. Nadiifinta shaqada loo qabtay muwaadiniinta inay ku safraan jawi nadaafadeed 365 [More ...]
Balaadhinta iyo Karşıyaka taraamyada waxay wadar ahaan gaarayeen 2019 milyan oo rakaab ah sanadka 40, iyagoo ka hortagaya ku dhawaad ​​100 kun oo tan oo ah kaarboon dioxide hawada. Tareenka, oo u adeegta laba wado oo kala duwan magaalada İzmir, waa 2019 milyan oo kiiloomitir sanadka 2,5. [More ...]
Turkey ayaa Automobile Enterprise Group (TOGG) CEO GurcanTurkoglu King, wadaagno macluumaad cusub oo ku saabsan automakers qoyska. Karakaş wuxuu yidhi, waxaan kala hadlaynaa Bosch xagga korantada baabuurta. Iyada oo leh 6 shirkadood oo inta badan Shiinaha ku leh batteriga gaariga [More ...]
Dawlada hoose ee magaalada Bal Metrokesir waxay hawlo jajab ah ka sameysay magaalada Ayvalık si loo hubiyo badbaadada taraafikada ee wadooyinka mas'uuliyadeeda saaran. Qorsheynta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Magaalo Weyn iyo kooxaha Nidaamka Tareenka, ee taraafikada degmada Ayvalık; dadka lugaynaya, [More ...]
Shaqada kale ee wadada ee ay bilaabeen dawlada hoose ee degmada Balıkesir ee degmada Gar waxay si weyn u fududeyn doontaa isu socodka dadka Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi iyo Vasıf Çınar Caddesi. Dhismooyinka taariikhiga ah ee xarunta tareenka, sida maktabadda iyo rugta farshaxanka [More ...]
Madaxweynaha İMO, Cemal Gökçe, ayaa sheegay in dhulgariirkii ka dhacay Elazığ uu digniin weyn u yahay in Kanal Istanbul laga saaro ajendaha dalka isla markaana la beddelo Dhulgariirkii Iiraan ee Istanbul. Gökçe, 100 kun oo dhisme oo ku yaal dhulgariirkii Istanbul oo suurogal ah [More ...]
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, oo baaritaano badan ku sameeyay barnaamijka K ›r› kkaleâ € ee Barnaamijka Shaqada, waa waqti gaaban K k ± rkâ €. Wuxuu siiyay farriinta ah inuu la kulmi doono adeegga Xawaaraha Sare ee Xawaaraha (YHT). Ixtiraam SAYGILI € [More ...]
AVM, oo ku qoreysa calaamadaha jihooyinka tareenka dhulka hoostiisa mara ee Istanbul, waa mid ka mid ah magacyada shirkadda iyo degganaanta, shirkadda dowladda hoose ee Inc. Sanadkii 2010, wuxuu kasbaday 2017 kun 453 TL. [More ...]